बढ्दा सधैं व्याकुलता मनैमा,
जान्थें स्वयं शान्त कुनै वनैमा ।
के अर्थले सूत्र भिरेर हिड्छौ ?
जातीय झुन्डिन्छ कि यो जनैमा ?
पुर्खाहरू लोभ नराख्नु भन्दथे-
राख्छौ तिमी स्वार्थ सधैं धनैमा ।
सड्’घर्षमा जीवन पूर्ण अर्पी –
सत्ता पियौ आख़िर यौवनैमा ।
उत्साहका साथ बनेर योद्धा-
भो प्राप्ति चाँडै पनि जीवनैमा ।
छन्द : इन्द्रवज्रा
बहर : हजज मुसम्मन अखरव मक्बुज अबतर
← सत्य नै डग्मगाउँछ
नाता नयाँ जोड्नु छ ! →